Kuzokwethulwa inhlangano ngokusemthethweni | News24
Kuzokwethulwa inhlangano ngokusemthethweni
ISITHOMBE: lethiwe makhanyaAmalunga enhlangano Isililo Organisation aphuma ezindaweni ezahlukene.
KUZOBANJWA umcimbi wokwethula ngokusemthethweni inhlangano engenzi nzuzo yomphakathi eyethiwe ukuthi -Isililo Organisation nekuhloswe ngayo ukunakekela amalunga emphakathi agulayo kanye nezintandane.
le nhlangano yonompilo izokwethulwa ngokusemthethweni mhlaka-1 kuZibandelela ehholo lase-Tamboville ngohora leshumi ekuseni (10am).
Ngokusho kukaSihlalo wayo uNks Ntombikayise Mtolo uthe bathathe isinqumo sokuba bayethule ngokusemthetweni ukuze abantu bezoyazi.
“Sesineminyaka sawuqala lo msebenzi kodwa sibona engathi abantu esibasebenzelayo emiphakathini yethu abakazi lutho ngathi kangangokuba kwesinye isikhathi ugcina usubuzwa ukuthi uphumaphi ngoba abayazi inhlangano yethu, ayikaze yethulwe kubona ngokusenthethweni.
“Into eyenza ukuba sinqume ukusungula le nhlangano ingoba besifuna ukusiza umphakathi. Abantu abaningi bayagula abakwazi ukuzinakekela, abanye baze bayeke ngisho ukudla amaphilisi ngoba besaba ukuya emtholampilo okanye bengenawo amandla okuzifikela bona emtholampilo. Thina ke siyabasiza naloko senze isiqiniseko sokuthi bayadla bayawaphuza namaphilisi,” kubeka yena.
Le nhlangano isebenza ezindaweni eziningi njengoba inamalunga ahlukene endaweni yaseWillowfontein, Imbali Unit 14, Tamboville, Copesville kanye nakaNyamazane.
UNks Mandisa Mzimela nongunobhala wayo le nhlangano uthe basebenza zonke izinsuku ngaphandle kokuthola inzuzo kodwa ngoba befuna ukusiza umphakathi. Uthe izinkinga ababhekana nazo ukuthi abanye abantu abahambelayo babafika bengenalutho ngisho okuya ngasethunjini nokugcina sekwenza umsebenzi wabo ube nzima.
“Baningi kakhulu abantu esibahambelayo kanti futhi izinkinga zabo nazo zihlukene angeke size sikwazi ukuthi sizjilwe thina sodwa. Ingako sicela ukuthi sisebenzisane nosonhlalakahle, osomabhizini abangakwazi ukusixhasa kanye nabazamasonto. Uma singasebenzisana kuningi esingakwenzela imiphakathi yethu. Singajabula kakhulu uma singathola nabantu abangasixhasa ukuze siqhubeke senze umsebenzi omuhle siwenzela umphakathi,” kuphetha yena.
Ngeminye imininingwane mayelana nomcimbi okanye inhlangano uqobo lwayo ungaxhumana noSihlalo enombolweni ethi : 083 865 9825 okanye uNobhala: 063 329 0648.